The Readers Club :: News and updates
Deposit your Participant Fee in this account
Saving Account No: 35580
New Baneswor Branch
पुस्तक पढी गौरवशाली विजेता बन्नुहोस् ।
तपाईं हामी सबैजना आ-आफ्ना रुचिका पुस्तकहरु पढ्ने गर्न सक्यौं भने हामी हाम्रो घरभित्र सभ्य परिवार बन्ने छौं, त्यसपछि त्यस्ता घरहरुका समूहबाट हाम्रो समाज सभ्य बन्ने छ। त्यसपछि हाम्रो देश सभ्य तथा उचित र गतिशील भै विकासक्रमतिर लम्कन सक्नेछ।
त्यसको लागि हामी सबैमा नियमित पुस्तक पढ्ने बानीको सभ्यताको विकास गरौँ। हुन सक्छ, यस क्लबद्वारा आयोजित "The Best Readers of the Year 2070" मा तपाईं प्रतियोगी भई अथवा अरुलाई प्रतियोगी बन्न प्रेरित गरी पुस्तक पढ्ने सभ्यताको विकास गर्न सक्छौं कि? 'देशले हामीलाई के गर्यो, के दिएको छ, नेताहरु, मन्त्रीहरु के गर्दैछन्?' भन्ने प्रस्नहरुलाई गौण विषय मानी हामी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो देश विकास गर्नको लागि के दिन सक्छौं, त्यो पहिला सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छा, कि कसो?
धेरै हदसम्म असल पुस्तकहरु पढ़नाले सिर्जनशील सोचको विकास गराऊँदछ, विवेक सदैव सकारात्मक रहन्छ, शान्त तथा स्वच्छ रहन्छा जसको प्रभावले तपाईंलाई कुनै पनि प्रकारको गलत कार्य गर्न गराउन प्रोत्साहित गराउने छैन।
यस्तै पुस्तक पढ्ने बानीको अभावको करणबाट होला, यस नवीनतम कार्य थालनीको बिषयमा सरकारी निकायहरूमा जाँदा प्रोत्साहन भन्दा हतोत्साही बढी पाइएको थियो। बढी नीतिनियम तथा पावन्दहरुको प्रभाव पाइने हुँदा उचित सहयोगको आश न्यून रहने पाइएको छ। जे होस्, तपाईं हामी यस् नवीनतम प्रयासलाई साझा दायित्व सम्झी अधिकतम सफल पारौं। यो हाम्रो लागि, हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि हो, यसमा कुनै विदेशी दातृ संघसंस्थाको अनुदान कदापि प्रवेश हुन दिइने छैन। स्मरण राहोस्, यस आधुनिक पुस्तकालयको कुनै कमाई खाने भाँडो बनाउने लक्ष्य छैन, बरु समाजलाई ज्ञान कमाई खाने बाटो दिने सफल प्रयास लिएको छ।
आउनुहोस्, यस अभियानमा सबैजना सरिक होऔ।